Wararka - Astaamaha Zinc Alloy & Badges
Daawaha Zinc waa walxo badan oo isku mid ah oo leh xuduud yar, marka la barbar dhigo musmaarradii dhaldhalaalka naxaasta ah, Astaamaha daawaha zinc & kaadhadhku aad bay waxtar u leeyihiin gaar ahaan marka tirada dalabku weyn yahay ama cabbirka pin -ku uu weyn yahay. Wixii baaxad weyn ee sumadda daawaha zinc, waxay noqon kartaa mid khafiif ah oo leh miisaan yar. Waxaan samayn karnaa calaamadaha sumadda birta ee zinc oo miisaankoodu ka yar yahay 1kg. Adiga oo isticmaalaya wax -ka -beddelidda duritaanka adeegsiga daawaha zinc, marka naqshadu leedahay meelo badan oo gudaha ah oo la gooyay, daawaha zinc ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican iyada oo aan la dhimin. Halka musmaarrada naxaasta ah, biinanka birta ah, biinanka daabacan oo leh gooyn gudaha ah ama meelaha furan oo keliya ayaa lagu samayn karaa kharash dhimis oo loo baahan yahay. Ka sokow biinanka la gooyay, dhinta tuurida daawaha zinc sidoo kale waa saamayn 3D oo aad u fiican si ay u muujiso astaamo ka gargaar badan ama kubik ka badan naxaasta ama birta shaabadaysan. Doorashada kaliya ayaa si buuxda u muujin karta naqshadaha cabbirka yar.
Waxyaabaha: daawaha zinc
Midabada: ku dayashada dhaldhalaalka adag, dhaldhalaalka jilicsan ama aan midabka buuxin
Jaantuska Midabka: Buugga Pantone
Dhamee: dhalaalaya/matte/dahab duug ah/nikkel
Xidhmada: bacda poly/kaarka warqadda la galiyay/sanduuq caag ah/sanduuq jilif/sanduuq warqad ah
Qaadashada heerka ugu hooseeya ee tixgelinta, waxaa jira xaddidaadyo dhowr ah oo loogu talagalay biinanka alloy zinc, shilimaad, bilado.
** Dahaadhka naxaasiga ah ee qadiimiga ah looma heli karo ku -dayashada birta zinc ee dhaldhalaalka adag
** Dhameystirka dahaadhka qadiimiga ah + ee dhalaalaya looma heli karo daawaha zinc
** Ku dayashada dhaldhalaalka adag iyada oo aan la dhagxin & dhaldhalaalka jilicsan looma heli karo alaabada dahabka ah ee zinc ee midabada hufan
** Halkii ciid -baabi'in lahayd, warshadu waxay isticmaashaa #2 & ceeryaamo
Hadiyadaha Quruxda Badan ee Dhaldhalaala waa xirfadle biinanka kartoo soo saaraha, waxaan soo saarnaa biinanka qaabab kala duwan oo ku jira daawaha zinc, naxaas, naxaas, bir, bir bir, aluminium iyo lacag qaali ah. Xor ayaad u tahay inaad email u dirto naqshadaada qabyada ahsales@sjjgifts.com. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u hesho naqshaddaada caadada ah, iibintayada xirfadda leh ayaa had iyo jeer u soo jeedin doonta macaamiisha iyada oo ku saleysan nashqadeeda iyo bartilmaameedkooda, waxayna dib kuugu celin doontaa summadaha biinka ee tayada wanaagsan leh.
Waqtiga dhejinta: Aug-04-2021